Booliska xudduudaha oo gobolka Malmö ka codsaday in a loo soo celiyo dadka sharciyada loo diiday - iftineducation.com
iftineducation.com – Booliska ilaalada ka ah xuduudaha dalkaan Iswiidhan ayaa gobolka Malmö ee caasimadda seddexaad u diray codsi ah in dib loogu soo celiyo muhaajiriin badan oo sharciyada dalka loo diiday kuwaas oo ku dhuumaaleeysanaya magaaladda Malmö iyo nawaaxigeeda.
Dad gaaraya labbo boqol oo qof oo sharciga loo diiday ayaa ku dhuumaaleeysanaya magaaladda, waxaana booliska doonayaan in maamulka gobolka ku caawiyo macluumaad la xirriira dadkaasi dhuumaaleeysanaya.
Inkasta uu isku daygaani yahay talaabo lugu doonayo in lugu fuliyo dadyowgaasi si dalka looga saaro, ayaa hadana waxaa booliska hortgaan sharci adag oo xafidaya xogta qofta balse booliska ayaa ku doodaya iyagoo u diray maamuladda degmooyinka gobolka Malmö xeerka waaxda socdaalka ee sheegaya in haddii ay dhacdo in loo baahdo ay maamuladdu waajib ku tahay wada shaqeyn la xirriirta soo gudbinta shaqsiyaadka xogtooda la doonayo kuwaas oo lugu fuliyo go’aanka dalka looga saarayo.
Booliska xuduudaha ayaa kal hore iyagoo ku raad jooga dadyowga laga noqday sharciyada waxaa ay bartilmaameedsadeen iskuulada, xarrumaha caafimaadka gaar ahaan kuwa dhimirka iyo goobaha aan la ogoleyn la gallo. Talaabadaas ayaa waxaa ay kala kulmeen qeylo dhaan iyo cabasho.
Leif Fransson, oo ah mas’uulka fulinta howlaha xudduudaha ee goboladda koonfureed, ayaa sheegay in haddii dowladda dooneyso in la fuliyo go’aanka dhoofinta dadka loo diiday sharciyada ay waajib tahay in wax laga badalo sharciyada hore u jiray.
“Waxaa na hortaala howl muuqata ah oo ah inaan ku raad joogno dadka aan halkaan xaq u laheyn ineey joogaan, maatana ma jirto wax la yiraahdo goobo aan la ogoleyn in la gallo” ayuu yiri.
Soomaalida Noorweey ee sharciyadda loo diiday oo laga yaabo qasab in lugu celiyo iyagoo jeebeeysan